Dowlad Goboleedyada oo kasoo horjeestay sharci ay waddo DFS (Akhriso).
May 23, 2018 - Written by Editor
Muqdisho:-Wasiirada Wasaaradaha Howlaha Guud ee maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa soo saaray war saxaafadeed wadajir ah oo ay uga soo horjeedaan hindise sharciyeedka lagu dhisayo Hey’adda Waddooyinka oo ay wado Wasaaradda Howlaha Guud ee dowladda Federaalka.
Warsaxafadeedka ay si wada jir ah u soo wada saareen Maamulada Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa u qornaa sidan.
1. Heshiiska saddex geesoodka ah ee mashruucan Tayeynta Hay’adaha Hawlaha Guud – heer Federaal, heer dawlad Goboleed iyo Gobolka Banaadir (Tripatite Agreement for Strengthening Institutions for Public Works) oo ay kala saxeexdeen Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Bankiga Horumarinta Africa iyo UNOPS 13kii Jannaayo 2017 – qodobkiisa 4aad, qaybtiisa 4.02 (ii) wuxuu shuruud adag ka dhigayaa in la sameeyo guddi haga mashruucan (Project Steering Committee); wuxuuna cayimay inay xubno ka yihiin hay’adaha hawlaha guud ee kor ku xusan. Guddigan oo magacaaban, waxaan muran ku jirin in shir guddoonka guddigan uu yahay Wasiirka Hawlaha Guud ee Federaalka Soomaaliya. Guddigan, waxaa xil gaar ahi ka saaran yahay inay go’aammo ka gaaraan arrimaha ay u arkaan inay muhim u yihiin hirgelinta mashruuca. Hase yeeshee, mudadii shirkani socda, waxaa soo if-baxday:
1. Hoggaanada Sare ee Dawlad Goboleedyada;
272,523 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress